War U Fiican Jamaahiirta Liverpool- War Cusub Oo Ka Soo Kordhay Dhaawicii Neymar Jr Iyo Walwalka PSG Oo Sii Kordhay. - GOOL24.NET
War U Fiican Jamaahiirta Liverpool- War Cusub Oo Ka Soo Kordhay Dhaawicii Neymar Jr Iyo Walwalka PSG Oo Sii Kordhay.
Warar laga helayo xaaladii ugu danbaysay ee dhaawicii Neymar Jr ayaa sheegaya in uu seegi doono kulanka guul ama geerida ku ah kooxdiisa PSG ee ay Liverpool ku soo dhawayn doonto caasimada Paris iyada oo dhakhaatiirtu sheegtay in Neymar Jr uu u baahan doono muddo ka badan inta ka horaysa kulanka Liverpool.
Neymar Jr ayaa dhaawac looga saaray kulankii xulkiisa Brazil uu guusha ka gadhay Cameroon isaga oo waliba garoonka ka baxay 8 daqiiqo oo kaliya markii ay ciyaartu socotay laakiin qoraal uu shalay Neymar Jr ku soo qoray bartiisa Instagram ayuu ku dajiyay quluubta jamaahiirta kooxdiisa PSG.
Neymar Jr ayaa soo qoray: “Waxaan filayaa in aanu ahayn mid aad halis u ah”. Laakiin wararka soo baxaya ayaa sheegaya in xidiga reer Brazil uu seegi doono kulanka UEFA Champions League ee ay Liverpool arbacada danbe booqan doonto PSG.
Neymar Jr ayaa la geeyay cisbitaalka Neuilly oo ku yaala banaanka caasimada Paris waxayna dhakhaatiirtu sheegeen in Neymar Jr u baahan yahay muddo laba todobaad ah si uu uga soo kabsado dhaawicii ku soo gaadhay kulankii Cameroon.
Neymar Jr ayaa lagu war galiyay in uu ka maqnaado kooxdiisa PSG saddexda kulan ee kala ah Toulouse iyo Bordeaux oo ah kulamada horyaalka France ee Ligue 1 iyo waliba kulanka Champions league ee Liverpool, waxaana xogtan bixiyay wargayska Gazzetta dello Sport.
Dhinaca kale PSG ayaa war ka sii xun heli karta marka ay soo baxaan baadhitaanada Kylian Mbappe kaas oo isna ku dhaawacmay kulankii France iyo Uruguay, waxaana Gazzetta dello Sport lagu sheegay in go’aanka Mbappe ee Liverpool uu noqon doono mid daqiiqada ugu danbaysa la gaadhi doono.
Laakiin Mbappe ayaa isna seegi doona kulamada La Liga ee Toulouse iyo Bordeaux waxaana xili danbe la hubin doonaa haddii uu ciyaari karo kulanka Liverpool ee UEFA Champions League. PSG ayay walwal badan ku haysaa in Mbappe iyo Neymar ay hal habeen wada dhaawacmeen xili kulanka Liverpool ee November 28 uu soo dhawaanayo.
Si kastaba ha ahaatee, waqtiyada soo socda ayaa la filayaa in wali ay soo bixi doonaan warar kale oo sida ka faah faahsan iyada oo aan wali PSG wax war rasmi ah ka soo saarin muddada ay maqnaan karaan Neymar Jr iyo Mbappe.